एक कारण को लागि धन उगाहने वाला तपाईं को बारे मा भावुक हो र रोमांचक र प्रेरणादायक छ। अधिक पैसा तपाईं sarcoidosis संग तपाईं को परिवर्तन को मदद गर्न सक्छन् मान्छे संग अधिक जीवन को बढावा दिन। तल तपाईले सुरूवात मद्दत गर्न संसाधनहरू पाउनुहुनेछ, जगेडािङ पृष्ठ र हाम्रो डाउनलोडयोग्य SarcoidosisUK Fundraising गाइड स्थापना गर्न निर्देशन सहित, जानकारी र विचारहरूसँग भरी।
JustGiving पृष्ठ सेटअप गर्दै - यो सजिलो छ!
तपाईंको अनलाइन कोष सङ्कलन पृष्ठको लागि, हामी जस्टिङ को प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछौँ। यो छिटो र सजिलो छ। तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् (नयाँ सन्झ्यालमा पृष्ठ खोल्छ) र आफ्नो पृष्ठ सिर्जना गर्न तलका चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
या त - खाता दर्ता गर्नुहोस्। (यो सजिलो छ। तपाईले चाहानु भएको खातामा तपाईको फेसबुक खाता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।) / Or - तपाईंको अवस्थित खातामा लग इन गर्नुहोस्।
क्लिक गर्नुहोस् [कोष सङ्कलन शुरू गर्नुहोस्].
जब सोधिने प्रश्न 'तपाईं एक दर्ता दान को लागि धन उगाहने वाला हो?', चुन्नुहोस [हो, जारी राख्नुहोस्].
सर्कोडोसिसयूका लागि खोज्नुहोस्। (तपाइँले हामीलाई पनि हाम्रो दान संख्याको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ: 1063986।)
JustGiving ले तपाईंलाई सोध्नुहुन्छ कि: तपाइँ एक कार्यक्रममा भाग लिन, एक अवसर मनाउनु भएको छ, मेमोरीमा धन उठाउने वा आफ्नै काम गरेर।
यदि तपाईं आफ्नो घटना सूचीबद्ध देख्न सक्नुहुन्न (जस्तै लन्डन मैराथन), चयन गर्नुहोस् [आफ्नै आफ्नै थप्नुहोस्] पृष्ठको तल्लोमा र तपाईंको गतिविधिको बारे मा थोडा अधिक लेख्नुहोस्।
तपाईंको वेब ठेगाना छनौट गर्नुहोस् - यो लिङ्क हो जुन तपाइँ साथीहरू र परिवारसँग साझा गरिने छ जब उनीहरूलाई दान गर्न सोध्दा।
टिक [हाँ] यदि तपाईं बेक बिक्री चलाइरहनुभएको छ, वा कार्यक्रममा टिकट बेच्न, रफल वा नीलामी। तपाईंको पृष्ठमा दान उपहार उपहारको लागि योग्य हुनेछैन। (तपाईं उपहार एड को बारे मा अधिक जानकारी को लागी मनी मैटर्स, तल को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्)।
क्लिक गर्नुहोस् [सिर्जना गर्नुहोस् तपाईंको पृष्ठ].
पर्वले हामीलाई6दिन लग्यो। सबै बेन र म चाहन्छु एक ठूलो पागल साहसिक थियो, हामी दुवै चढाई मा छन् र यो केहि जस्तो जस्तो देखिन्छ जुन हामी निरन्तरता र प्रशिक्षण संग पूरा गर्न सक्दछौं। मानिसहरूले सोचेका थिए कि हामी बाबा हुनुहुन्थ्यो तर यो साँच्चिकै जीवनभर साहसिक समयमा एक पटक थियो।
बेन र मलाई लाग्छ कि हामी बलियो बलियो हुन्छौं, कडा र दृढ हो, तर म कति बलियो इच्छा र कठोर मेरो माममा केही छैन। उनी आफ्नो जीवनमा धेरै देखि लडेका छन्, सरकोडिसिसको साथ उनको युद्ध उनको सबैभन्दा हालैको लडाइँ हो।
यो एक दान को लागि पैसा उठाउन को लागि एक सम्मान थियो कि मेरो मां जस्तै कसैलाई मदत गर्न सक्षम छ। 1 9। 99 को माथि हिँड्दा सरकोडोसिससँग दुख्ने दैनिक चढ्ने व्यक्तिको तुलनामा कुनै पनि चीज छैन।
SarcoidosisUK Fundraiser मैट
म्याट र तिनका साथी बेनले 2017 मा सरकोडोसिस युकेको लागि माट किमिमानाजोरलाई पराजित गर्यो
जस्टिङ्गिंग युक्तिहरू - तपाईको पृष्ठ भन्दा बाहिर पाउनुहोस्
तपाईंको कोष सङ्कलन पृष्ठ अब सेट अप र दान स्वीकार गर्न तयार छ। बस गाइङ्गिङ तपाईले साप्ताहिक आधारमा SarcoidosisUK लाई पैसा लिनुभयो। अब तपाईं मजा सामानमा सुरू गर्न सक्नुहुनेछ - आफ्नो पृष्ठ निजीकृत र मित्र र परिवार साझा गर्न।
सुरुवात सुरू गर्नुहोस् - तपाईंको यात्रा पछ्याउन र दान गर्न तपाईंको साथी र परिवारलाई थप समय दिन्छ
तपाइँको कथा बताउनुहोस्। यदि तपाईं जान्दछन् कि तपाई किन सरकोडोसिस यूके को हेरचाह गर्नुहुन्छ भने अधिक जान्दछ।
एक लक्ष्य सेट गर्नुहोस्। कोष सङ्कलन लक्ष्यको साथ पृष्ठहरू 46% बढि बढ्दै जान्छन्। त्यसैले साहसी हुनुहोस् र तिनीहरूलाई आफ्नो लक्ष्य बताउनुहोस्।
तपाईंको पृष्ठमा तस्बिरहरू थप्नुहोस्। यो कोष कर्जादाता प्रति प्रति 14% बढि बढाउनु पर्छ।
अद्यावधिकहरूसँग मित्रहरू प्रदान गर्नुहोस्। तपाईँका साथीहरूलाई फोटोहरूको साथमा बजेट र धन उगाहाउने। तिनीहरूलाई आफ्नो पृष्ठमा थप्नुहोस् र सोशल मिडियामा पुन: साझेदारी गर्नुहोस् - तपाईका साथीहरू प्रभावित हुनेछन् र दान गर्न इच्छुक हुनुहुनेछ!
मानिसहरूलाई धन्यवाद। व्यक्तिगत रूपमा वा सोशल मिडिया। धन्यवाद दिइएका मानिसहरूले उनीहरूलाई सहयोगको लागि प्रदर्शन कृतज्ञता र भविष्यमा पुन: दान गर्न प्रोत्साहित गर्नेछन्।
पोस्ट-ईवेंट कोष रिजर्भेसन। केवल किनकि घटना समाप्त भएको छ यसको मतलब यो होइन कि तपाईं कोष उडान गर्न रोक्न आवश्यक छ। कार्यक्रमको अन्त्य भएपछि 20% दानहरू आउँदछ, त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले घटनालाई कसरी अप्ठ्यारो पार्नुभयो कि तपाईंले कसरी गर्नुभयो।
तपाईंको घटना बढाउने - शब्द बाहिर पाउनुहोस्
एक अचम्मको पृष्ठ सेट अप धेरै महत्त्वपूर्ण छ, तर यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले सकेसम्म तपाइँको घटना बारे धेरै व्यक्तिलाई थाहा छ। तपाईंको घटनाको बारेमा जागरूकता फैलाउनुहोस् तपाईंको लक्ष्य मारेर एक महत्त्वपूर्ण कदम हो।
सोशल मिडियाको शक्ति। Facebook, Twitter, Instagram, र धेरै अन्य। बारम्बार तपाईंको घटना बारे पोष्ट गर्दै र प्रगति गरे यो मानिसहरूको ठूलो दायरा पुग्न एकदम राम्रो तरिका हुन सक्छ।
हैशग को दोहन। जब चहचहाना प्रयोग गर्दा सान्दर्भिक हैशगेजहरू समावेश गर्न सम्झँदा यो अधिकतम व्यक्तिहरूले यसलाई देख्न सक्दछ।
तपाईंको सम्पर्कहरू इमेल गर्दै। बल रोलिंग गर्नको लागि ठूलो तरिका तपाईंको मित्र र सबैभन्दा नजिकको परिवारलाई इमेल गर्नु हो। केही दाईहरूको लागि एउटा खाली पृष्ठ डरलाग्दो हुन सक्छ, र त्यसो भए केही दानहरूले अरूलाई पनि दान गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ।
स्थानीय प्रेस सम्पर्क गर्नुहोस्। स्थानीय कागजात वा तपाइँको स्थानीय रेडियो स्टेशनमा पुग्नुहोस्। बिटको एक्सपोजरले वास्तवमा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्छ।
ह्याङ अप पोस्टरहरू। एक सानो पुरानो बनाइएको छ तर समुदायमा रुचि उत्पन्न गर्न एकदम राम्रो तरिका हो, खासकर यदि तपाइँ स्थानीय घटनालाई व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईंको घटनाहरूको लागि प्रेमीहरू - प्रलोभन पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुहोस्
केही कार्यक्रमहरू तपाईले तपाइँका अतिथिहरूलाई उत्कृष्ट पुरस्कार र पुरस्कारहरू, जस्तै raffles, नीलामी र क्विजिजहरू घुसाउनुहोस्। यो विभिन्न स्रोतबाट यी पुरस्कारहरू इकट्ठा गर्ने तरिकाहरू जान्न ठूलो छ ताकि तपाईं व्ययहरू कम गर्न र दान गरिएको रकम लाई अधिकतम गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रारम्भिक सुरू गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले सुरु गर्नु अघि धेरै समय छोड्नुभयो। यसले व्यवसाय लिन सक्छ, विशेष गरी ठूला ब्रान्डहरू, तपाईलाई एक पुरस्कार दिन सक्षम व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न समय। ध्यान राख्नुहोस् कि केहि पुरस्कार समाप्ति मिति हुन सक्छ।
बक्स बाहिर सोच्नुहोस्। यो खोजी गर्दा उत्तम वस्तुहरू हेर्न केवल उत्तम छैन। सेवाका लागि सोध्नु उत्तम खानाहरू जस्तै व्यक्तिगत पाठहरू वा व्यक्तिगत प्रशिक्षण सत्रहरू राम्रो तरिकाले हुन सक्ने एक उत्तम तरिका हुन सक्छ।
साथी र परिवारलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईलाई नजिक बनाउनेहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि तिनीहरू तपाईंको घटनाको लागि कुनै पनि सम्भावित पुरस्कारहरू दान गर्न इच्छुक हुन्छन्।
सम्पर्क ब्रान्डहरू। ठूला कम्पनीहरूसँग सम्पर्कहरू पुरस्कार प्राप्त गर्न एकदम राम्रो तरिका हो, किनकि उनीहरूले CSR नीतिको भागको रूपमा दान कार्यक्रमहरूको प्रति सकारात्मक स्वभाव देखाउँछन्। सुपरमार्केटहरू विशेष रूपमा एक राम्रो व्यक्ति हुन् जसमा धेरै व्यक्तिहरु लाई दानियहरुको लागि मासिक बजेट छ।
स्थानीय व्यवसायलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। स्थानीय व्यवसाय महोत्सव प्राप्त गर्न उत्कृष्ट छन्। तपाईं निर्णय निर्माता हेर्न सक्षम हुनुहोस् त्यसैले चाँडै पुरस्कारहरू उठाउन सक्षम हुन्छन्।
हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता। के तपाईलाई कसैलाई थाहा छ जसले कसलाई हस्तिहरु, खेलकुदहरू वा कलाकारहरूसँग जोडेको छ? एक उपहार प्राप्त गर्ने एक महान तरीका हो जसले मूल्यमा धेरै खर्च गर्दैन तर यो भावनात्मक मूल्य हो जुन तपाईंको अतिथिहरूसँग लोकप्रिय हुन सक्छ।
सोध्न नडराउनुहोस्! सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कसलाई सोध्न डर लाग्छ। तपाईं ठूलो कारणको लागि पैसा उठाउँदै हुनुहुन्छ र सम्भावित व्यक्तिले तपाईंलाई भरोसा राख्नेछ। उनीहरूले के गर्न सक्नु भन्दा राम्रो कुरा हो भन्न सक्दैन!
साना वस्तुहरू सँगै समूह बनाउनुहोस्। तपाईंले यी सबै पुरस्कारहरू विभिन्न स्थानहरूबाट इकट्ठा गर्नुभयो तर मूल्यमा धेरै कम छन् कि पुरस्कारहरू नीलामी गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँका वस्तुहरू टोकरीहरूमा आफ्नो इच्छानुसार वृद्धि गर्न ग्रुप गर्नुहोस्। मात्रामा गुणस्तर सम्झनुहोस्!
तपाईंको घटनाहरू व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्नको लागि यहाँ केहि संसाधनहरू छन्।
A4 पोस्टर टेम्प्लेट (वर्ड)
प्रायोजन फारम (PDF)
Dandelion लोगो (पीडीएफ)
SarcoidosisUK लोगो (पीडीएफ)